Sexy Rugby တွင်လုပ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်တိုသော! | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » ရပ်ဘီ Sexy အတွက်လုပ် Shorty အမျိုးသမီးများနေ့,!
ဆိုင် sexy ရပ်ဘီ မိန်းမတို့အားဆက်ကပ်အပ်နှံဒီ shorty နှင့်အတူ၎င်း၏အမည်ကိုမှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဘယ်တော့မှ! တစ်ဦးယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အဖြူကနေ, ကပြသနိုင်ဖို့အများကြီးမပါဘဲဣတ္ခါးဆစ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သင့်ရဲ့ဗီရိုဖြည့်စွက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သည်အဝတ်ရပ်ဂ်ဘီ။
အဆိုပါရပ်ဘီဆိုင် Sexy နှင့်အတူအဖြူရောင် sexy ဖြစ်
compound 95% ဝါဂွမ်းနှင့် 5% elastane, ဒီ shorty ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုထားအမျိုးသမီး ရပ်ဂ်ဘီဆိုင် တစ်ဦးတည်းသာ chic နှင့် timeless အရောင်အတွက်ကဒီမှာလာ: ဖြူ၏။ အဆိုပါအမျိုးသမီးသည်, သုံးအရွယ်အစားရရှိနိုင်ပါသည်: S, M နှင့်အယ်လ်ဒီအတွင်းခံအဝတ်အစားဟာအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်အလွန်ခံနိုင်ရည်ထည်ပါဝင်ပါသည်သတိပြုပါ။ ယင်း၏သိပ်သည်းဆ 220 g / m²ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးနှစ်သိမ့်အဘို့, ရပ်ဂ်ဘီ baselayer လည်းသင့်ရဲ့တင်ပါးဖသောခါးမှာပါးလွှာဖဲ elastic တီးဝိုင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အားလပ်ရက်များအတွက်လက်ဆောင်စိတ်ကူးရှာဖွေနေပါသလား သင်ကဆိုင်မှာ Sexy ရပ်ဘီကနေကြောင်းထုတ်ကုန်အပေါ်အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။ , အဆင်ပြေစတိုင်နှင့်တာရှည်ခံသောကြောင့်လည်းနေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သောမိန်းမတို့နှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားသည်။
ဒါကြောင့်ဒီနည်းနည်း shorty အားလုံးအခါသမယများအတွက်သင်သည်အတူ။ သူကအလုပ်မှာအိမ်မှာ, နေ့ကိုတလျှောက်လုံးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဒါဟာအစအားကစား outings နှင့်အခြား drives တွေကိုစဉ်အတွင်းကိုချစ်! elasticity နဲ့ကြာရှည်ခံမှုကြောင့်မည်သည့်အားကစားများ၏အလေ့အကျင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဆက်စပ်ပစ္စည်းပါစေ။ ၎င်း၏ဝါဂွမ်းပစ္စည်းဿုံရှူရှိုက်: shorty အဆက်မပြတ်နှစျသိမျ့မြင့်မားသောအဆင့်သေချာ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အားလုံးရာသီ, နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီ၌ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ elastic ထည်ဿုံအမျိုးသမီးပုံစံကိုက်ညီခြင်းနှင့်ကအားလုံးကိုအခြေအနေများတွင်အဆင်ပြေဆက်လက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ, ဘောင်းဘီတို, ရွရွပြေး, အင်္ကျီသို့မဟုတ်နွေရာသီအတွက်ပင်စားဆင်ယင်သကဲ့သို့ကောင်းစွာဝတ်ဆင်!
အားလုံးအဝတ်အစားအပေါ်မြှင့်တင်ရေး -15% "